LEGO® Junior Create & Cruise နဲ့ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » LEGO® Junior Create & Cruise နဲ့
LEGO® Junior Create & Cruise နဲ့ APK ကို
LEGO® Junior အထင်ကရ, ပျော်စရာနဲ့မော်ဒယ်များ Build လွယ်ကူမှတဆင့်အသက်အရွယ် 4-7 ကလေးများ Lego အုတ်နဲ့ကြီးမြတ်ပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးရဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Lego Junior အစုံအမြန်စတင်ဒြပ်စင်များနှင့်အမေသို့မဟုတ်အဖေထံမှအကူအညီမပါဘဲတည်ဆောက်ထားနိုင်ရေတွက် Pre-ထုပ်ပိုးအိတ်ဆံ့ - ဆိုသေးငယ်ဆောက်အပိုဂုဏ်ယူစေသည်ရာ။
LEGO® Junior Create & Cruise နဲ့ Google ရဲ့အတွင်းရေပန်းစား apps များနှင့်ဂိမ်းများများထဲမှ Play ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးသန်း + 50 ထက် downloads, ထားရှိခြင်းကဒီ 2017 အတွက်ကလေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နှင့်မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်းတွေထဲကစဉ်းစားနိုင်အတည်ပြု။
သင့်ရဲ့ဆိတ်သငယ် 2016 နှင့် 2017 အတွက် Lego အားဖြင့်ကလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာကအကောင်းဆုံးဂိမ်းကစားခြင်းအားဖြင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နားလည်မှုဖွံ့ဖြိုးကူညီပါ။ တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ကစားဒီဂိမ်းရဲ့နောက်ကွယ်ကအဓိကတန်ဖိုးများဖြစ်ကြပြီးကလေးတွေဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များပေါ်မှာကစားသင်ယူနားလည်ရန်အဘို့ကြီးစွာသောအတှေ့အကွုံဖြစ်ပါတယ်။
က 100% လုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်၌မိမိတို့ဦးနှောက်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှု play နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သူတို့ကိုကူညီပေးသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအဓိကအားမူကြိုကျောင်းသားများများအတွက်ပညာရေးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Lego နှင့် Lego လိုဂိုအဆိုပါ Lego Group ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ 2017 အဆိုပါ Lego Group မှ©။
THE LEGO® MOVIE2™ update ကိုဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါသည် - နှင့်အရာအားလုံးကိုယခုပင် Awesome ပါ!
* နယူး Minifigures: THE LEGO® MOVIE2™ထံမှ Emmet သို့မဟုတ် Lucy အဖြစ် Play နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်စူးစမ်း!
* နယူးယာဉ်များ:4အတွက်န်းကျင် Cruise နဲ့ Emmet ရဲ့ Escape ယုန်ကလေးအပါအဝင်အသစ်သောမော်တော်ယာဉ်များ, အအေး!
* နယူးပေး Audio: အားလုံးအသစ်ကအသံနဲ့ဂီတ!
LEGO® Junior Create & Cruise နဲ့
72.85 ကို MB
Lego System ကို A / S က